Mitambo Senge PUBG (2020) - Wepamusoro 4 Dzimwe nzira - Kutamba
Mitambo Senge PUBG - Wepamusoro 4 Dzimwe nzira
Uri kutsvaga mitambo yakafanana nePUBG?Zvakanaka, nhasi, wasvika kurudyi nzvimbo. Tiri kuzokurukura mimwe mitambo yakanaka kwazvo yaunogona kutamba pane PUBG. Iyi mitambo yakafanana nePUBG mune zvakakura zvinhu, uye mimwe mitambo yepasirese ndiyo mitambo yakanyanya kuyerwa.Saka, ngatinyurirei mukati chaimo, uye regai tione mitambo yakaita sePUBG.
Chinyorwa cheZvakanakisa PUBG Dzimwe nzira mu2020:
1. Danai kuDuty: Warzone
Iwe unogona kunge wakaona Kudanwa Kwebasa: Warzone ichiita pamusoro pechinyorwa. Kudanwa kweDuty Warzone ndeyekutanga-munhu shooter Hondo-Royale mutambo nevatambi ve150 uye ave anoshamisa mukurumbira wemhando yepamusoro giraidhi uye Gameplay. Warzone inouya nemepu inoshamisa, kusanganisira kushandiswa kweGreat Weapons. Chikamu chega chega mumutambo chakavakwa chaizvo, uye zvese zvinosiririsa zvinotarisirwa.
Pamwe, isu tinofarira mutambo nekuti iwe unowana mumwe mukana wekupinda mumutambo mushure mekufa kwako; nekuhwina muGulag, nzvimbo inoitirwa kurwa kweumwe neumwe, unogona kudzosa vamwe vako vechikwata kubva kuBheja chiteshi chakapararira pamepu.
Kufona kweDuty kunyangwe kunosanganisira imwezve maitiro, iyo inonzi Kupamba. Mune ino modhi, iwe unofanirwa kuunganidza mari inosvika madhora miriyoni imwe, yakapararira pamepu. Chikwata chinotora mari yacho kutanga mushure mekurwa neVavengi vese vanotora mukukunda. Kana iwe uchida kurodha pasi Call of Duty: Warzone, unogona kurodhaunura mahara nekudzvanya pano .
Fortnite mumwezve mutambo weHondo Royale uyo unozivikanwa pasi rese. Uyu mutambo une magiraidhi ayo akasiyana zvachose kubva kune mamwe ese Hondo Royale aripo mumusika. Fortnite ine nzira ine hungwaru maererano nemifananidzo yayo, zvinoonekwa, uye mutambo wemitambo. Unogona kuvaka zvivakwa zvemahara mumutambo uyu nekukohwa huni, zvidhinha, uye simbi kuti ugadzire pakati pako nemuvengi wako. Iyi Hondo Royale iri pakati pevane zana vatambi uye uyo anopona kwekupedzisira anotora iyo Victory Royale.
Icho chikonzero chekuti Fortnite ive inozivikanwa nekuda kwemwaka wayo uye nenyaya yenyaya iyo vagadziri veFortnite yavaka. Parizvino, Fortnite achangopedza nezvechiitiko chayo chikuru kwavakabatana neMarvel Cinematic Universe. Iye zvino vane Mwaka weChishanu: Zero poindi parizvino iri kuitika, iyo yakaita shanduko dzakakomba maererano neMepu, Pfuti, uye Hondo kupfuura.
Fortnite ine ina Hondo Royale mutambo modes, anoti Solo, Duos, Trios, uye Chikwata. Ivo zvakare vane akasiyana maLM modes anoramba achichinja kazhinji. Pane imwe modhi, inonzi Kunaka. Mune ino modhi, iwe unogona kugadzira yakasarudzika kamuri neshamwari dzako uye kutamba navo imwe chete. Unogona kudhawunirodha mutambo uyu mahara nekudzvanya pano .
3. Apex: Ngano
Apex Legends mutambo unogadzirwa nevanogadzira Titan Spawn, Respawn. Respawn yatora iyo yepakati kufamba, kuyerera, uye kupfura kubva kuTitanfall ndokuiisa mudiki diki Hondo Royale mutambo.Iwo magiraidhi eApex ngano ndeechokwadi chaizvo zvekuti anotaridzika kunge mutambo wemazuva ano weFPS.
Pfungwa yemutambo uyu ndeyekuti iwe unodonhedza-pasi nechikwata chako pamepu nekudzivirira denderedzwa rinodzikira nekuuraya muvengi kuti atore kukunda kwako. Kune vatambi vakasiyana mumutambo uyo anonzi iNgano. Imwe neimwe iine kugona kwakaringana kunogona kushandiswa mumutambo. Uyu mutambo une nzira dzakasiyana senge Solo, Duos, uye matatu. Nehurombo, uyu mutambo hauna rutsigiro rwekutamba kwechikwata.
Pfuti dzinoshandiswa muApex Legends dzakanyatsonaka; paunenge uchipfura, iwe unogona kuona iro ropa richichururuka richibuda kubva kuvavengi vako, iro rinozvipa iyo chaiyo nzira. Mutambo hauna chero yakaoma keybindings. Zviri nyore kunzwisisa uye kuAce mumutambo. Unogona kudhawunirodha Apex: Legends nekudzvanya pano .
4. Mhete yeElysium
Oo, ikozvino iyo Crazier Rings yeElysium Battle Royale mitambo yasvika pamusika kuti vazviparadzanise ivo pachavo nePUBG. Iine mepu yayo hombe uye inonakidza yekupedzisira nguva uye gadzira matsva matsva nezve zviito, Tencent's Nguva yechando-themed Rings yeElysium, iyo ichangobva kuburitsa yakakwenenzverwa yekutanga-yekuwana zita, iyo inoita kuti iite kunge yakakosha.
Vanopfuura makumi matanhatu vatambi vakasiyana vakatamba vachipesana kudzivisa blizzard inouraya iyo inogadzirisa makomo ari kure nemasabhabha. Zvakadaro, denderedzwa rinosanganisa mafambiro aunoita kubva panongedzo A kuenda kunongedzera B nemepu inoratidza kusimudza kwedenga, mabhodhi echando, magirazi-ruoko, uye magiya ekukwira makomo ayo anosanganisira anoshamisa emhando yekufungidzira. Uyu mutambo unogona kuita senge yechinyakare kurwa royale. Uyu mutambo wepachena wekutamba uyo unogona kutorwa pasi nekudzvanya pano .
Saka ichi chaive chinyorwa chipfupi pamitambo yakaita sePUBG yaunogona kutamba. Urongwa urwu hune mamwe emhando dzakanakisa dzemitambo dzaunogona kutamba pachinzvimbo chePUBG. Saka, wakamirirei? Enda utore mutambo wako waunofarira, uye tizivise kuti ndeupi mutambo wauchange uchirodha pasi nekutamba muchikamu chemashoko pazasi.
15 Akanakisa Mitambo saRoblox
Akanakisa Muchinjikwa-Platform Mitambo
Maitiro Ekuti Unzwike Mazuva makumi matatu Emahara Muedzo?
Sei kushandura MOV kuti MP4?
emahara emafirimu online hapana kusaina kumusoro
yakafanana netunes ye android
roblox promo kodhi dzeheti 2016
tarisa online bhaisikopo yemahara kutenderera
kik download yecomputer mahara
kurodha chero bhaisikopo mahara
sei kusaina kune netflix